तपाईको YouTube च्यानलको लागि राम्रो रङ योजना के हो? - YTpals
यद्यपि यो सुरुमा मामूली निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ, प्लेटफर्ममा तपाइँको सफलता सुनिश्चित गर्न तपाइँको YouTube च्यानलको लागि राम्रो रङ योजनामा ​​​​निर्णय आवश्यक छ। रङहरूले मानिसहरूको भावनाहरूलाई गहिरो रूपमा प्रभाव पार्छ भनेर चिनिन्छ। यो तथ्य धेरैले पुष्टि गरेको छ अध्ययन पनि। मानव आँखाले 10 मिलियन रङहरू बीच भिन्नता गर्न सक्षम छ, र प्रत्येक रङ परिवारले व्यक्तिमा फरक प्रकारको व्यवहार ढाँचा निकाल्छ। तपाईंको YouTube सौन्दर्यशास्त्रलाई सही तरिकाले डिजाइन गरेर, तपाईंले मानिसहरूलाई आफ्नो च्यानलसँग संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ।
यस लेखमा, हामी तपाइँलाई तपाइँको YouTube च्यानल को लागी सही रङ छनोट गर्न को लागी एक गाइड प्रदान गर्नेछौं, जसले दर्शकहरु को भावनाहरु लाई सही दिशा मा ड्राइभ गर्न मद्दत गर्नेछ।
रंग को मनोविज्ञान बुझ्दै
त्यहाँ पक्कै पनि समय आएको हुनुपर्छ जब तपाईंले भिडियो वा YouTube च्यानलमा विशुद्ध रूपमा एउटा कारणका लागि क्लिक गर्नुभएको थियो - एक आकर्षक रङ प्यालेट। यो मानव व्यवहार मार्फत व्याख्या गर्न सकिन्छ रंग मनोविज्ञान। कुराको तथ्य यो हो कि प्रत्येक रङको एक विशेष आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य र स्पेक्ट्रम हुन्छ। प्रत्येक रङले मानिसहरूको विचार, मूड र व्यवहारमा फरक फरक प्रभाव पार्छ। यहाँ विभिन्न रंगहरूको प्रभावको एक सिंहावलोकन छ -
रातो: यो रंग बलियो भावना जगाउन जानिन्छ। यसले अत्यावश्यकताको भावना सिर्जना गर्न र हृदयको दर बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले भोकलाई प्रोत्साहन दिन पनि मद्दत गर्न सक्छ, जसले यसलाई खाना सम्बन्धी भिडियोहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ।
पहेंलो: यो रंगले न्यानोपन, प्रफुल्लता र स्पष्टतालाई जनाउँछ र मानसिक प्रक्रियाहरूलाई उत्तेजित गर्न जानिन्छ। पहेंलोले संचारलाई प्रोत्साहन दिन पनि मद्दत गर्न सक्छ।
निलो: निलो एक गैर-आक्रामक रंग हो जसले शान्तता र निर्मलतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले ब्रान्डमा विश्वास र सुरक्षाको भावना सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ किनभने यो रंग मानव जीवनमा स्थिर रूपमा मानिन्छ।
सुन्तला यो रंगले न्यानोपन देखाउँछ र उत्साह र उत्साह पनि झल्काउँछ। यो रचनात्मकता संग नजिकको सम्बन्ध छ र एक हंसमुख, आत्मविश्वास, र मैत्री ब्रान्ड को छवि प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बैजनी: बैजनी रङले राजपरिवार, बुद्धि र सफलताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यसलाई कल्पनाशील र रचनात्मक ब्रान्डको छवि प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईंको YouTube च्यानलको लागि रङ योजना छनोट गर्दै
अब जब तपाइँसँग रङ मनोविज्ञानको आधारभूत समझ छ, हामी तपाइँको YouTube च्यानल रङ योजना छनौट गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं। यहाँ त्यसै गर्ने चरण-दर-चरण विधि छ -
तपाईंले आफ्नो च्यानल मार्फत चित्रण गर्न चाहनुभएको व्यक्तित्व र यो के हो भन्ने बारे सोच्नुहोस्। केहि कुञ्जी शब्दहरूमा निर्णय गर्नुहोस् जुन यसलाई राम्रोसँग वर्णन गर्दछ।
गुगल छविहरू वा Pinterest मा ती कुञ्जी शब्दहरू खोज्नुहोस्, र ती कीवर्डहरूसँग सम्बन्धित छविहरू हेर्नुहोस्। प्रत्येक कुञ्जी शब्दका लागि केही छविहरू बचत गर्नुहोस्।
तपाईंले बचत गर्नुभएका सबै छविहरू संयोजन गरेर मूड बोर्ड सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं प्रयोजनको लागि Canva वा कुनै अन्य सम्पादक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो मनपर्ने रङहरू मध्ये केही छनोट गर्न मूड बोर्ड प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको च्यानल विषयवस्तुसँग कुन रङहरू राम्रो हुनेछ भन्ने बारे सोच्नुहोस्।
तपाइँ तपाइँको रङ योजना को लागी न्यानो र न्यानो रङ को मिश्रण छनोट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाइँको च्यानल ब्रान्डिङ पप अप बनाउन मद्दत गर्नेछ। कम्तिमा3देखि4रंगहरू संकुचित गर्नुहोस्।
रङहरूको छनोट गरिएको सूचीबाट, तपाईंले आफ्नो कार्य रङ, आधार रङ, र ग्राउन्डिङ रङहरूमा निर्णय गर्न आवश्यक छ। आधार रंग तपाईंको YouTube च्यानलको प्रमुख व्यक्तित्वको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, कार्य रङहरू तपाइँको च्यानल पप बनाउनु पर्छ। तपाईं आदर्श रूपमा कार्य र आधार रङहरू बीच एकदमै भिन्नता सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने अन्तिम कुरा भनेको ग्राउन्डिङ रङहरू छान्नु हो, जुन तपाईंको आधार र कार्य रङहरू सन्तुलनमा राख्नको लागि हो। तिनीहरू नरम वा गाढा हुन सक्छन्, तपाईंले छनौट गर्नुभएको बाँकी रंगहरूमा निर्भर गर्दछ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो रङ योजना छनोट गरिसकेपछि, तिनीहरू तपाईंको च्यानलको विषयवस्तुसँग कसरी फिट हुन्छन् भनी हेर्न तपाईं तिनीहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको च्यानल ब्रान्डिङलाई अलग बनाउन को लागी फन्ट र पृष्ठभूमि संग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सही रङ योजनाको साथ, तपाइँ कुनै पनि समयमा YouTube हेराइहरूको राम्रो संख्या रेकर्ड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यससँग, हामीले तपाइँको YouTube च्यानलको लागि राम्रो रङ योजना छनौट गर्ने बारे जान्नको लागि सबै कुराहरू समावेश गरेका छौं। माथि उल्लिखित सुझावहरू र रणनीतिहरूले तपाईंलाई तपाईंको च्यानललाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्ने रङहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले निश्चित रूपमा राम्रो दर्शक संलग्नताको नेतृत्व गर्नेछ। यदि तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल को बृद्धि गर्न अन्य तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, YTpals.com तपाइँको लागि यहाँ छ। जस्ता सेवाहरूको दायरा प्रदान गर्दछौं नि: शुल्क YouTube लाईक र निःशुल्क YouTube भ्यूहरू, जसले तपाईंको च्यानलको जैविक वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्छ। हामी, YTPals मा, हाम्रा सबै सेवाहरूसँग 100% सुरक्षा ग्यारेन्टी पनि प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ हाम्रो कुनै पनि प्रिमियम YouTube सेवाहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँ आज हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईको YouTube च्यानलको लागि राम्रो रङ योजना के हो? YTpals लेखकहरू द्वारा, 26 अप्रिल 2022
यूट्यूब थम्बनेलहरू किन सदस्यताहरू पाउनको लागि आवश्यक छ - के जान्ने
तिनीहरू पहिले यस्तो जस्तो नदेखिन सक्छ, तर ग्राहकहरू युट्यूबको जीवन शक्ति हुन्। तिनीहरूले मञ्चलाई फलफूल हुन अनुमति दिन्छ र सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको काम देखिन यो सम्भव बनाउँदछ। यो, बदले, बनाउँछ ...
तपाइँको मार्गदर्शक YouTube कार्डहरू सही तरीकाले प्रयोग गर्नका लागि
यदि तपाईं तपाईंको युट्युब भिडियोमा थप संलग्नता प्राप्त गर्ने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामीसँग वास्तवमै तपाईंले खोजिरहनु भएको कुरा हामीसँग छ! YouTube कार्डहरू तपाइँको यूट्यूब च्यानल र ड्राइभ मार्केट गर्न एक प्रभावी उपकरण हो ...